Web Development ကိုလေ့လာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? - The Khant Digital
Web Development ကိုလေ့လာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
ဒီနေ့ကျွန်တော် တင်ပြချင်တာကတော့ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Web Development ကိုလေ့လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
ပထမဦးဆုံးပြောချင်တဲ့ အချက်ကတော့ Web Development ကို မဆုတ်မနစ်တဲ့ ဇွဲလုံ့လနဲ့ စတင်လေလ့လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ဆုံဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလည်း ဒီမှာအရေးပါပါတယ်။ ကိုယ်သာတကယ် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်း ရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေ၊ လမ်းညွှန်မှုတွေကလည်း မရှိမဖြစ်ပါ။ ‘ဆရာမပြ၊ နည်းမကျ’ ဆိုတဲ့စကားပုံတောင်ရှိသေးတာပဲ။ ဒါကတော့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ကို နည်းနည်းလေးပြောပေးတာပါ။ တခြားလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Browser(Chrome, Firefox, Safari, etc..)
ကျွန်တော် Browser တွေကို Web Development ရဲ့ အသက်သွေးကြောလို့ တင်စားပြီးပြောချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ code တွေ အလုပ်ကောလုပ်ရဲ့လား၊ error တွေများတက်နေသလား? အလုပ်လုပ်တယ်၊ error လည်းကင်းတယ်ဆိုရင်တောင် design ကဘယ်လိုအနေအထားဖြစ်နေလဲ၊ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြန်လည် စစ်ဆေးဖို့ browser တွေကိုသုံးရပါတယ်။ ကိုယ့် project တစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တောင် ပြန်ကြည့်ရင် browser ကပဲပြန်ကြည့်ရတာဆိုတော့ သေချာပါတယ် browser က Web Development ရဲ့အသက်သွေးကြောပါ။
ဘယ် Browser တွေကိုသုံးကြမလဲ?
Mac(Apple) သမားတွေက Safari ကိုအများစုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး Chrome, Firefox နဲ့ Internet Explorer ကိုတော့ Windows နဲ့ Ubuntu သမားတွေက အသုံးများပါတယ်။ Web Development နဲ့ပတ်သတ်ပြီး code တွေကို run တဲ့အခါ တစ်ခုမကျန်အကုန်အဆင်ပြေတဲ့ Browser ကိုတော့ကျွန်တော် မသုံးဖူးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးနီးပါးအဆင်ပြေတဲ့ browser တွေတော့ရှိတယ်။ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာကတော့ Mac သမားတွေအတွက် Safari နဲ့ Chrome၊ Windows နဲ့ Ubuntu သမားတွေအတွက် Chrome နဲ့ Firefox တို့ကို စတင်သုံးကြည့်ဖို့ပါပဲ။ Apple နဲ့ Code မရေးဖူးတော့ သူ့ ကိုသုံးရတဲ့ feeling ကိုတော့ ကျွန်တော်အတိအကျမသိပါဘူး ။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနှင့် လက်ရှိလဲသုံးနေတဲ့ browser ကတော့ Chrome ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သုံးရတာကတယ်ကို လွယ်ကူ၊ အဆင်ပြေပါတယ်။ (Chrome – highly recommended)
Text Editor (or) Code Editor ဆိုတာဘာလဲ?
Text Editor ဆိုတာ ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ computer ရဲ့ browser မှာ run မယ့် code တွေကိုရေးရတဲ့ နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Text Editor မှာ code တွေရေးမယ်၊ ရေးထားတဲ့ code တွေကို file တစ်ခုအနေနဲ့သိမ်းမယ်(eg. index.html, style.css, dynamic.js)၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ file ကို browser မှာ run မယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ file ထဲက browser မှာ run လိုက်တဲ့ code တွေကို browser ပေါ်မှာ web page အနေနဲ့ မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Text Editor ဟာလဲ Web Development အတွက် မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။
Text Editor အကြောင်း တစေ့တစောင်း.
Operating System တိုင်းမှာ Default Text Editor တွေပါလေ့ရှိပါတယ် (ဥပမာ – Mac မှာဆိုရင် TextEdit, Windows မှာဆိုရင် NotePad, Ubuntu မှာဆိုရင် NanoEditor)။ ဒါပေမယ့် programmer အများစုက default ပါလာတဲ့ text editor တွေကိုသုံးလေ့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ သူ့ကိုအသုံးနည်းတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ code တွေရေးတဲ့အခါ နေရာတိုင်းမှာ စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီ ရိုက်နေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Install လုပ်ပြီးသုံးရတဲ့ Text Editor တွေကတော့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့မှာ feature တွေ၊ plugin တွေ ပါပြီးသားမို့ programmer တွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်များများပြီးအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ code တွေကို သူ့ language အလိုက် အရောင်လေးတွေလဲ ခြယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမြင်လည်းလှပါတယ်။ တချို့ Text Editor တွေကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရသလို၊ free ရပြီး သုံးလို့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ Text Editor တွေလဲရှိပါတယ်။ Google မှာ online text editor လို့ရိုက်ရှာပြီး browser ပေါ်မှာတင် တစ်ခါတည်း code ရေးလို့ရတဲ့ Online Text Editor တွေလည်းရှိပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်ကူပြီးလူကြိုက်များတဲ့ Text Editor တွေကတော့ Sublime Text 3, Visual Studio Code, Atom နဲ့ Dream Weaver တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိအသုံးပြုနေတာက Sublime Text3ဖြစ်ပေမယ့် Computer Hardware အမြင့်ပိုင်းကိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ Visual Studio Code ကို သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ သူ့ကို Microsoft Company ကတီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီး feature တွေ၊ plugin တွေအများကြီးပါတာကြောင့် Mac, Windows နဲ့ Ubuntu အကုန်လုံးမှာ သုံးရတာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးရေးထားပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Computer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Computer ရှိမှ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းတွေနဲ့ code ရေးလာနိုင်ပြီဆိုပေမယ့် ထိရောက်မှုသိပ်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့အနေနဲ့လည်း အားမပေးပါဘူး။ Computer ကို လုံးဝမရနိုင်တော့တဲ့အခြေနေမျိုးမှာသာ ဖုန်းကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Web Development နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ဆောင်းပါတွေကိုတော့ ဖုန်းထဲကဖတ်လဲ ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး ။
အပေါ်မှာဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေက သင့်အတွက်များစွာအသုံးဝင်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အခုမှစတင်လေ့လာနေသူတွေ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ဘယ်အရာတွေကိုအသုံးပြုရမှန်းမသိ မဖြစ်ရလေအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေးစရာများ၊ အကြံပေးစရာများရှိရင် comment (သို့) chatbox မှလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်သလို ကျွန်တော့ကို နောက်ထပ် ဒီလိုဆောင်းပါတွေထပ်ရေးဖို့ အားပေးချင်ရင်တော့ post ကို share ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
← Prev: 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 နဲ့ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 ကို အတူတူလို့ သင်ထင်ပါသလား??? Next: Web Development ကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ? →